The Refuge (2019) | MM Movie Store
မားကပျဈဆိုတာ ဒုစရိုကျလောကမှာ နာမညျရှိ ကွေးစားတဈဦးပါလူသတျခငျြလား ပိုကျဆံလုခငျြလား လူရှာပေးရမလား အကွှေးတောငျးပေးရမလားသှေးကွှေးဆပျပေးရမလားဘာဖွဈဖွဈ သူ့ကိုအလုပျအပျတာမှနျသမြှ ပွီးမွောကျအောငျ လုပျပေးနိုငျတဲ့လူပါစကားနညျးမယျ ဒဲ့တိုးပွောမယျ သသေသေပျသပျအလုပျလုပျမယျ..
ဒါတှကေသူ့ဂုဏျပုဒျတှပေါပဲသူ့ကိုအလုပျအပျတဲ့လူကတော့ ဖရနျ့ဆိုသူဖွဈပွီးတော့သူ့ကိုလညျးအငျမတနျယုံကွညျကိုးစားပါတယျအပျသမြှအလုပျတိုငျး အောငျမွငျပမေယျ့တဈခကျြမှာတော့ မားကပျဈရဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ဝပျဈရဲ့အမှားကွောငျ့ လှဲခြျောသှားရတဲ့အခါမှာတော့.
သူဘယျလွိုဖရှေငျးမလဲဖရနျ့ကသူ့ကိုထောကျထားညှာတာပါ့မလားအလုပျကိုဆုံးခနျးတိုငျအောငျ သူပွနျဖာထေးနိုငျပါ့မလား ဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာကွညျ့ရှုရမှာပါ
မားကပ်စ်ဆိုတာ ဒုစရိုက်လောကမှာ နာမည်ရှိ ကြေးစားတစ်ဦးပါလူသတ်ချင်လား ပိုက်ဆံလုချင်လား လူရှာပေးရမလား အကြွေးတောင်းပေးရမလားသွေးကြွေးဆပ်ပေးရမလားဘာဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုအလုပ်အပ်တာမှန်သမျှ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူပါစကားနည်းမယ် ဒဲ့တိုးပြောမယ် သေသေသပ်သပ်အလုပ်လုပ်မယ်..
ဒါတွေကသူ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပါပဲသူ့ကိုအလုပ်အပ်တဲ့လူကတော့ ဖရန့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအင်မတန်ယုံကြည်ကိုးစားပါတယ်အပ်သမျှအလုပ်တိုင်း အောင်မြင်ပေမယ့်တစ်ချက်မှာတော့ မားကပ်စ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝပ်စ်ရဲ့အမှားကြောင့် လွဲချော်သွားရတဲ့အခါမှာတော့.
သူဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဖရန့်ကသူ့ကိုထောက်ထားညှာတာပါ့မလားအလုပ်ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် သူပြန်ဖာထေးနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရှုရမှာပါ